हिट बन्दै ‘लुका छुप्पी’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
हिट बन्दै ‘लुका छुप्पी’
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार २०:०० लेखक नेपाली जनता
मुम्बई । बलिउड चलचित्र ‘लुका छुप्पी’ ले ५ दिनमा ५५ करोड भारु कमाएको छ । यो चलचित्रले विश्वव्यापी रूपमा यो रकम कमाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
अभिनेता कार्तिक आर्यन र अभिनेत्री कृति सेननको मुख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रले ‘लिव इन’ मा बसेर विवाह गर्ने निर्णय गरेपछिको घटनालाई प्रस्तुत गरेको छ । हास्यप्रधान यस चलचित्रमा कार्तिक र कृतिका बीच घट्ने विविध घटनाक्रमको सेरोफेरोलाई कलात्मक रुपमा उठान गरेको छ । लक्ष्मण उतेकरले निर्देशन गरेको यस चलचित्रले राम्रो सुरूवाती व्यापारसमेत गरेको छ ।
यसले चलचित्र रिलिजको पहिलो दिनमै ८.०१ करोड भारू कमाएको थियो । शनिबार १०.०८ करोड, आइतबार बिदाको दिन १४.०४, चौथो दिन ७.९० करोड, मंगलबार ५.०४ करोड कमाइ गरेको छ । यसरी भारतबाट कुल ४५.०७ करोड भारू कमाएको सिनेमाले बाँकी कमाइ भारतबाहिर गरेको हो ।
शिवरात्रीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको ‘लुका छुप्पी’ हिट भएपछि अभिनेत्री कृतिले सफलताका लागि धन्यवाद दिँदै प्रसाद समेत बाँडेकी थिइन् । मुम्बईस्थित एक शिव मन्दिर पुगेर उनले मन्दिर परिसरमा रहेका मानिसलाई प्रसाद बाँडेकी हुन् । अभिनेता कार्तिकसँग कृतिले जोडी बाँधेको यो चलचित्रले उनलाई सफलता दिलाएको भन्दै त्यसको खुसीयालीमा उनी मन्दिर पुगेको जनाइएको छ । कमाइसँगै उनले यस चलचित्रबाट आफ्नो कामको लागि निकै तारिफ पाएकी छन् । त्यस्तै, उनले यसअघि सिनेमाघरहरूमा पुगेर प्रशंसकलाई आश्चर्यमा पार्दै ‘लुका छुप्पी’ को टिकटसमेत बेच्न भ्याएकी थिइन् ।
कम्प्युटर अपरेटरलाई हुम्ला मालपोतको जिम्मा
हुम्ला । जिल्लाको एक मात्र मालपोत कार्यालय ३ महिनादेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
अज्ञात समूहले गोली प्रहार गर्दा एक महिलाको मृत्यु
कपिलवस्तु । यहाँको वाणगंगा नगरपालिका- ४ कुवेरापुरमा अज्ञात समूहले गोली प्रहार गर्दा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
जुम्ला विमानस्थल २० दिनका लागि बन्द
जुम्ला । जुम्ला विमानस्थल २० दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । बाँकी रहेको स्तरोन्नतिको काम गर्नका लागि यही…
ग्यास उद्योगीका मनोमानी: मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई अाजैदेखि कारबाही गर्ने सरकारी तयारी !
काठमाडौं । सरकारले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई शुक्रबारदेखि कारबाही गर्ने…
मेरो नाम लिँदा बेहोश भएँ-देवी मगर, मिस नेशनल आइकन–२०१९
विजेताको नाम घोषण हुँदा अक्कमकिइन् उनी, मानौ उनलाई विश्वास नै लागेन । जब उद्घोषकले तेस्रोपटक देवी मगरको नाम लिए,…
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदः १ सय १० सिटमा कम्तीमा ८४ जना महिला, विजयी उम्मेदवारको नाम प्रस्तावित गर्न दलहरूलाई पत्राचार !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको १ सय १० सिटमा कम्तीमा ८४ जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै…
नेपाली सेनाका जर्नेल, कर्नेलका घरघरबाट ‘अर्दली’हरु फिर्ता गर्न निर्देशन 203 views